နယူးယောက်ရှိ NAB ပြပွဲတွင် Rohde & Schwarz မှအများပြည်သူသုံးအင်တာနက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ပါဝင်မှုအတွက် relayCaster ကိုတိုးချဲ့မည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Rohde & Schwarz New York မှာ NAB Show မှာအများပြည်သူအင်တာနက်ကိုကျော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာအလှူငွေများအတွက်မြှင့်တင်ရန် RelayCaster တင်ပြ
ကိုလံဘီယာ, Md ။ - Rohde & Schwarz အမှုဆောင်အရာရှိဒီအဆင့်စဉ်အတွင်းအမေရိကန်တစ်လွှားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1000 တီဗီဘူတာများအတွက်ချန်နယ်သစ်တာဝန်ကျနေတဲ့အကူးအပြောင်းမှဦးဆောင်သော repack အဆိုပါ FCC သည်နှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်လမ်းညွှန်မှုပေးမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်, Rohde & Schwarz က transmitter ATSC 3.0 ဖို့ချောချောမွေ့မွေ့အကူးအပြောင်းသည်။ R & S မှ THU9evo အရည်-အအေးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF transmitter ကိုမိသားစု ATSC တက်သည်မှ 43 ရာခိုင်နှုန်းစွမ်းအင်ထိရောက်မှုတန်ဖိုးများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက Motama GmbH ၏နည်းပညာလေးလည်းကတည်းက US မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသထားကြောင်း, Rohde & Schwarz NAB New York မှာအမေရိကန်ဈေးကွက်မှ RelayCaster နှင့် CodecCaster ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ RelayCaster အများပြည်သူအိုင်ပီကွန်ယက်ကိုကျော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာအလှူငွေဖွနှင့် CodecCaster High-density ကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ transcoding ပေးပါသည်။
ဗားရှင်းအသစ်၏ RelayCaster features တွေ SDI ပေါင်းစည်း /HDMI input ကိုနှင့် encoding က - ဤကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာအလှူငွေပလက်ဖောင်းတန်ဖိုးပေါင်းထည့်ထားတဲ့ feature များ။ packet ကိုဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များပိုမိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနေကြသည်အဖြစ် RelayCaster နှင့်အတူစီမံခြင်းမပြုရသေးသောကွန်ရက်များမှတဆင့်တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာပံ့ပိုးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသိသိသာသာ, တိုးတက်နေပါတယ်။ RelayCaster နှင့်အတူ, CDN ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူစျေးကြီး, ဆက်ကပ်အပ်နှံထားလင့်များသို့မဟုတ်ကန်ထရိုက်များအတွက်မလိုအပ်ရှိပါတယ်။ RelayCaster အင်တာနက်နှင့်အတူမည်သည့်အရပ်မှမဆိုအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။ optional ကိုစာဝှက်စနစ်နှင့်အတူ, ဒေတာစီးဆင်းမှုအားလုံးပေးပို့သူနှင့်အသံဖမ်းအကြားကာကွယ်ထားပါသည်။ RelayCaster ပစ်မှတ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပေး. အဖြစ်တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာဝန်ဆောင်မှုအော်ပရေတာများနှင့် OTT အော်ပရေတာနေထိုင်ကြသည်။
CodecCaster high-performance ကိုနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးသည် IP-based ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် MPEG သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးဘို့အတွက်ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, Real-time transcoding များအတွက်အလှည့်-key ကိုစနစ်ဖြစ်သည်။ CodecCaster အပြည့်အဝ MPEG-2, AVC / H.264 နှင့် HEVC / H.265 အဘို့အသပ္ပါယ် streaming များအဘို့အမျိုးစုံသော interlacing ရှိနေပါသည်မှ transcoding နှင့် transrating ထောက်ခံပါတယ်။ စီးလိုက်နာနှင့် OTT ဒီဗွီဘီ၏ output ကိုလည်းထောက်ခံသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အသံ AAC အဘို့အမှတဆင့်နဲ့ audio transcoding ရှောက်သွား, MPEG အသံနှင့် Dolby ဒီဂျစ်တယ်လ် Plus အားရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါ့အပြင် display ကို on ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်လိမ့်မည် R & S ကဗင်းနစ် 4K မီဒီယာဆာဗာကို။ R & S ကဗင်းနစ်တို့မှာအသွင်ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတွင်းမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ချန်နယ်ပလေးအောက်တစ်အခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒါဟာအစက IP-based ထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် Workflows ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ရေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်သူတို့ကိုအနာဂတ်-proofing နေတုန်းတည်ဆဲ SDI baseband ဗိသုကာအတွင်းချက်ချင်းလျှောက်လွှာနိုင်ပါတယ်။
Rohde & Schwarz စိတျထဲမှာအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနှင့်အတူ R & S ကဗင်းနစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအသစ်ကအင်္ဂါရပ်တွေ, လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများထက် devices များနှင့်ထုတ်ကုန်အတွက်သော့ခတ်ခံရပူဇော်ကြောင်းပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများအသုံးပြုခြင်းကိုကျူးလွန်သည်။ R & S ကဗင်းနစ်ဟာအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါမီဒီယာန်ဆောင်မှုများအတွက်မူဘောင် (FIMS) စံမှတဆင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပေါင်းစည်းမှုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မဟုတ်ဘဲစီးပွားဖြစ် APIs အားထက်ပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများထည့်သွင်းတတိယပါတီရောင်းချသူသုံးစက်ကိရိယာများကိုကျယ်ပြန့်နှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါပေးထားတယ်။
R & S ကဗင်းနစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတွင်, Rohde & Schwarz On-ဝေဟင်ယုံကြည်စိတ်ချရအတွက်စံနှုန်းသစ်တခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ၏ system ရဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှု Rohde & Schwarz'' s ကိုစီးပွားဖြစ်ကို virtual သိုလှောင်မှု access ကိုနည်းပညာတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်မျိုးစုံတစ်ပြိုင်နက်မအောင်မြင်မှုများ၏အဖြစ်အပျက်ကိုမစွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းတွေနဲ့မပြတ်မတောက်ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ R & S မှ SpycerBox ဆဲလ်IBM က Spectrum စကေးဖိုင်စနစ်ဖြင့်ထောက်ခံသိုလှောင်မှုစနစ်များ, က virtual သိုလှောင်မှု access ကိုနည်းပညာချောမွေ့စွာမျိုးစုံစနစ်ကမအောင်မြင်မှုများကိုဖုံးအုပ်နိုင်စွမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-စကေး configurations မှတန်ဖိုးနည်းထံမှဒေတာ redundancy ၏မျိုးစုံအလွှာပေးပါသည်။ Rohde & Schwarz'' s ကို modular သိုလှောင်မှုချဉ်းကပ်မှုကွဲပြားခြားနားသော bandwidth ကို, စွမ်းရည်နှင့် redundancy အဆင့်ဆင့်ကနေနှင့်ဤအဆင့်ဆင့်အနာဂတ်၌ပြုပြင်မွမ်းမံခံရဖို့အဘို့ကိုရွေးဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်နိုင်ပါတယ်။
Rohde & Schwarz ထို့အပြင် NAB New York မှာယင်း၏ R & S မှ CLIPSTER6ကို Workstation သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကအပြည့်အဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ turnkey ပြီးစနစ်, R & S မှ CLIPSTER6ရုပ်ရှင်နဲ့ထုတ်လွှင့်စီမံကိန်းများကို၏ post ကိုထုတ်လုပ်မှုအများအပြားဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးပုံစံများဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှဖမ်းယူထံမှတစ်ဦးကြံ့ခိုင် toolset နှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြား။ ဒါဟာအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်နှင့် Episode တီဗီကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ရွှေကိုစံကို Workstation စဉ်းစားသည်။ R & S မှ CLIPSTER6အနာဂတ်-အထောက်အထား extension များအတွက်အပြည့်အဝဆော့ဖျဝဲ-သတ်မှတ်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းကနေပလေးအောက်, အလှူငွေနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ multi-platform ကိုချဉ်းကပ်နိုင်ပါတယ်။
စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် streaming များန်ဆောင်မှုများအတွက် Audio / Video အကြောင်းအရာ Multi-ကြည့်များအတွက် software ကို-based ဖြေရှင်းချက် - ကိုလည်းပြသမှာလက်ပေါ်မှာ R & S မှ PRISMON ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဂန္နှင့် IP-based SDI အချက်ပြမှုများကိုထောက်ပံ့ဖို့အပြင်, က OTT / streaming များကးဘို့ protocol များ၏ပြည့်စုံသောအစုပေးထားပါတယ်။ R & S မှ PRISMON ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုပေး convergence စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြင်ကွင်းစုံဘို့တစ်ခုတည်းပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်း - ရုပ်သံလိုင်းပလေးအောက်နှင့်အလှူငွေကွန်ရက်များအနေဖြင့်ဖြန့်ဖြူးပတ်ဝန်းကျင်မှာမှ (ဥပမာကုန်း transmitter ကိုက်ဘ်ဆိုက်များ, ဂြိုဟ်တု up- / downlink ဘူတာ, IPTV ကျောရိုးအချက်အချာ, CDNs) ။ R & S မှ PRISMON ၏ hardware နဲ့ cloud-based များထားရှိစွမ်းရည်နှင့်အင်္ဂါရပ်၏တူညီသော set ကိုပျော်မွေ့။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ATSC 3.0 ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း FCC သည် repack isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် NAB16 nabshow Rohde & Schwarz က transmitter လှိုင်းနှုန်းသည် UHF transmitter ကို 2017-10-11
ယခင်: ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana NAB Show ကို New York မြို့မှာနောက်ဆုံးရမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ပစ္စည်းများ & Services မှ Demo မှ
နောက်တစ်ခု: 2017 SMPTE ညီလာခံမှာ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များဟန်ပြ virtual ပလေးအောက်